Abavelisi boMoya weLaryngeal | I-China i-Laryngeal Mask ye-Airway Factory kunye nabaxhasi
I-Laryngeal Mask Airway (eqinisekisiweyo)
Indawo yokuhamba imaski yaseLaryngeal sisixhobo somoya esihamba phambili esenziwe ngu-Archie Brain, MD kwaye saziswa ngoqheliso lwezonyango ngo-1988. UGqirha Brain usichaze esi sixhobo “njengenye into enokusetyenziselwa ityhubhu ye-endotracheal okanye isigqubuthelo sobuso esinokuphefumla ngokuzenzekelayo. Indlela yokuhamba emoyeni yemaski yokuphucula umoya ibiphucule kakhulu intuthuzelo kunye nokhuseleko lolawulo lwendlela yomoya kwihlabathi liphela.
Indlela yokuhamba yomoya yokuqinisa indawo yokugcina amanzi iyaguquguquka kwaye inocingo olujikelezayo lwezonyango ngaphakathi kwetyhubhu ephambili, akukho kinking.
I-Laryngeal Mask Airway (i-PVC)
Laryngeal mask airway sisixhobo esiphakamileyo sendlela yomoya esenziwe nguGqirha Brain kwaye saziswa ngoqheliso lwezonyango ngo-1988. UGqirha Brain usichaze esi sixhobo “njengesixhobo esinokusetyenziswa nakwityhubhu ye-endotracheal okanye kwisigqubuthelo sobuso esinomoya ozenzekelayo. Indlela yomoya yokugaya imilebe yelaryngeal yenziwe ngezinto ezibonakalayo ze-PVC ekrwada, i-latex yasimahla.